The Kpop Times Media - "၇ နှစ်ကျိန်စာ" ကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Idol အဖွဲ့များ
"၇ နှစ်ကျိန်စာ" ကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Idol အဖွဲ့များ
Written by Alfread
Published in Idol Profile
"၇ နှစ်ကျိန်စာ" အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ ၇ ဟာ ကံကောင်းခြင်းနံပါတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အဖွဲ့တော်တော်များများရဲ့ ၇နှစ်ပြည့်တွေမှာ ပရိသတ်တွေကြောက်လန့်တဲ့ စာချုပ်ဆွေးနွေးမှုတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ Idol စာချုပ်တွေဟာ ထုံးစံအတိုင်းစာချုပ်သက်တမ်း ၇ နှစ်တာပါ။ အဲ့ဒီနောက် Idol တွေဟာ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စာချုပ်အသစ်ထပ်ချုပ်နိုင်သလို စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်လို့လည်းရပါတယ်။ "၇ နှစ်ကျိန်စာ" ကိုကျရောက်လာတဲ့အခါ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက် အဖွဲ့ဟာ စာချုပ်ဆွေးနွေးမှုကို အောင်အောင်မြင်မြင် မကျော်ဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ "၇ နှစ်ကျိန်စာ" ဟာမိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့တွေကိုအများဆုံးကျရောက်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ရပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ကြောက်လန့်စရာအမှားတစ်ခုခုမရှိပဲ အဖွဲ့ရဲ့ ၇နှစ်ပြည့်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရအဖြစ်ဆုံး မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ ၇ဖွဲ့ပါ။
နိုင်ငံတကာမှာ ရောင်းအားအမြင့်ဆုံး မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်ပေမယ့် 2NE1 ဟာ ၇နှစ်ကျိန်စာကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ Park Boom ရဲ့ဆေးမှုပြဿ. နာဟာ အဖွဲ့ကိုရပ်နားဖို့ တွန်းအားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ၂နှစ်နီးပါး ပျောက်နေခဲ့ပြီးနောက် Minzy ဟာ YG ကုမ္ပဏီနဲ့ စာချုပ်ထပ်မချုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ 2NE1 ဟာ ကျန်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင် ၃ယောက်နဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေအချို့ကြောင့် comeback ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ 2NE1 အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ တရားဝင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ် ၃ယောက်တွဲအနေနဲ့ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက်မှာ "Goodbye" ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအသေးစားတစ်ခုမှဖြစ်ပေမယ့်လည်း 4Minute အဖွဲ့မှာမယုံနိုင်လောက်စရာအောင်မြင်မှုတွေရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ်က "Crazy" သီချင်းဟာ You Tube မှာ ကြည့်ရှုသူ သန်း ၁၀၀ ရရှိခဲ့တဲ့ ၆ဖွဲ့မြောက် K-Pop မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဒီလိုရရှိခဲ့တာဟာ ကုမ္ပဏီအသေးစားတစ်ခုမှ ပထမဆုံးအဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ့ "Hate" သီချင်းအတွက် ပရိုမိုးရှင်းတွေ အောင်မြင်စွာဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့ဟာ စာချုပ်အသစ်ကိုထပ်မချုပ်ခဲ့ဘဲ အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ HyunA ဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ်က PENTAGON ရဲ့အဖွဲ့ဝင် E'Dawn နဲ့ဒိတ်တင်ကိစ္စကြောင့် စာချုပ်မဖျက်သိမ်းခင်အထိ Cube ကုမ္ပဏီမှာ တစ်ကိုယ်တော် အနေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
3. SISTAR (2010-1017)
အံ့ဩလောက်စရာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ အခြားကုမ္ပဏီအသေးစားတစ်ခုမှအဖွဲ့ကတော့ SISTAR အဖွဲ့ပါပဲ။ SISTAR ဟာ "So Cool"သီချင်းနဲ့ ပထမဆုံး Billboard Korea K-Pop Hot 100 အဆင့်ဇယားမှာ နံပါတ် ၁ရခဲ့ပြီး Gaon အဆင့်ဇယားမှာ နံပါတ် ၁ရခဲ့ပါတယ်။ Hyolyn ဟာတစ်ကိုယ်တော်အနေနဲ့ရပ်တည်သွားဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ SISTAR အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ကြေညာပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နွေရာသီသီချင်းတွေထဲကတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးသီချင်း "Lonely" သီချင်းကိုဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ miss A အဖွဲ့ဟာ ၂၁ရက်အတွင်း ဂီတရှိုးတစ်ခုမှာ နံပါတ် ၁ ရခဲ့တဲ့ အမြန်ဆုံး မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အဖွဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဆု၂၁ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ miss A ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ လှောင်ပြောင်စရာမရှိပါဘူး။ အဖွဲ့တိုင်းဟာ အဆင့်ဇယားတွေမှာ ရှေ့ရောက်နေခဲ့ကြသလို miss A ဟာ ၇နှစ်ကြာပြီးနောက် အဖွဲ့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ Jia နဲ့ Min တို့ဟာ JYP နဲ့စာချုပ်အသစ်ထပ်ချုပ်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ miss A အဖွဲ့ကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
Nicole နဲ့ Jiyoung ဟာ DSP Media နဲ့စာချုပ်ဆက်မချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ KARA အဖွဲ့ဟာ ပြဿနာအချို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၄ယောက်မြောက်အဖွဲ့ဝင် Youngji ဟာ Kara Project လို့ခေါ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲရှိုးတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ခေါ်သွင်းခံခဲ့ရတာပါ။ မူလအဖွဲ့ဝင် ၃ယောက် Hara ၊ Gyuri နဲ့ Seungyeong တို့ဟာ စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ အဖွဲ့မဖျက်သိမ်းခင်အထိ KARA အဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့ဝင်၄ယောက်နဲ့ ၂နှစ်ကျော်နီးပါး အောင်အောင်မြင်မြင်ရပ်တည်နေခဲ့ပါ
Wonder Girls အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၂ခုနှစ်အထိ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိက နဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှာ ဆုများ ၊ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းများကို ရရှိခဲ့ပြီး US မှာ ပထမနေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Sunye နဲ့ Sohee တို့ဟာ JYP နဲ့စာချုပ်တွေကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့အချိန် အဖွဲ့ရဲ့သက်တမ်း၇နှစ်မြောက် ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ သူတို့ရဲ့ အမေရိကန်မှ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Wonder Girls အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ အဖွဲ့မဖျက်သိမ်းခင်အထိ တောင်ကိုရီးယားမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။
7. Girls' Generation (2007-လက်ရှိ)
သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် တောင်ကိုရီးယားမှာ "Nation's Girl Group" လို့ကျော်ကြားတဲ့ Girls' Generation အဖွဲ့ဟာ အအောင်မြင်ဆုံး ဒုတိယမျိုးဆက်မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့အဖြစ် K-Pop သမိုင်းမှာ အမြဲတမ်းရပ်တည်သွားမှာပါ။ သူတို့ဟာလည်း အဖွဲ့ရဲ့သက်တမ်း၇နှစ်မှာ "၇နှစ်ကျိန်စာ"ကို မကာကွယ်နိုင်ပဲ အဖွဲ့ဝင် Jessica ရဲ့ထွက်ခွာမှုဟာ ပြဿ. နာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး fandom အတွင်းမှာ အဓိကအက်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့၇နှစ်သက်တမ်းကို အရင်ကထက် ခိုင်မာအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ဟာ SM ကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းအဆုံးသတ်ခဲ့ပေမယ့် "Nation's Girl Group" ဟာ အဖွဲ့ဝင်၈ယောက်နဲ့ရှေ့ဆက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ သူတို့ရဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
SuperM ကို အမျိုးသမီး idol တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခဲ့ရင်
'Reply' ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး idol အဖြစ် မဲပေးခံခဲ့ရတဲ့ BLACKPINK ရဲ့ Jisoo
နောက်နှစ်မှာ စစ်မှုထမ်းဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ idol များ
ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင် လူနာဖြစ်ချင်သွားမယ့် idol ဆရာဝန်လေးများ
Idol နဲ့ Fangirl တို့ကြားက အချစ်ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲ သရုပ်ဆောင်များ ဇာတ်ညွှန်းဖတ်ကြပြီ
Latest from Alfread
သတင်း Google မှာ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Kpop အမျိုးသမီး အိုင်ဒေါ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Jennie ဖြစ်လာ
Park Chanyeol တို့ငယ်ငယ်က ချုပ်ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ပိုက်ဆံအချေးအငှားစာချုပ်
MTV ဂီတဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးအဖွဲ့လိုက်ဆုနဲ့ အကောင်းဆုံး Kpop ရရှိခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့
လေ့ကျင့်သူများ အေဂျင်စီမှ နုတ်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ YG ၏ တုံ့ပြန်ချက်
စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲတဲ့ရောဂါခံစားနေရတဲ့ TWICE အဖွဲ့ဝင် Mina
Copyright © 2018 The K-Pop Times Media, Myanmar. All Rights Reserved. Proudly presented by OrientWebs!